महिलाका लागि किन आवश्यक छ एस्ट्रोजेन हार्मोन? – Health Post Nepal
महिलाका लागि किन आवश्यक छ एस्ट्रोजेन हार्मोन?
२०७८ चैत १५ गते १४:०३
मानव शरीरमा कैयौं हार्मोन पाइन्छ, जसले शरीरको विकास र सामान्य क्रियामा सहयोग गर्छन्। तीमध्ये एक हो एस्ट्रोजेन हार्मोन। महिला तथा पुरुष दुवैमा पाइने भए पनि यसलाई ‘फिमेल हार्मोन’ या ‘सेक्स हार्मोन’ भनिन्छ। गर्भधारणका बेला आमा र शिशुको विकासमा यो हार्मोनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यस्तै, महिलाको स्तन तथा यौनांग वरिपरी रौं विकास गर्न पनि यो हार्मोनको भूमिका हुन्छ।
के हो एस्ट्रोजेन हार्मोन?
पुरुषमा टेस्टेस्टेरोन हार्मोन भनेजस्तै महिलामा एस्ट्रोजेन हार्मोन प्रमुख मानिन्छ। यो प्लेसेन्टा र गर्भाशयमा बन्छ। एस्ट्रोजेनका तीन प्रकारमा एस्ट्रोन, एस्ट्राडिओल र एस्ट्रिओल हुन्।
एस्ट्रोन महिनावारीको समयपछि शरीरमा रहन्छ। यो एस्ट्रोजेनको कमजोर रुप हो। शरीरले आवश्यकताका आधारमा यसलाई एस्ट्रोजेनको अरु रुपमा बदल्छ।
शरीरमा एस्ट्राडिओलको मात्रा बढी हुँदा यौन क्षमतामा ह्रास आउने, ओस्टियोपोरोसिस हुने र डिप्रेसन हुने हुन्छ। अझै अनियन्त्रित स्तरले स्तन क्यान्सरसम्मको खतरा निम्त्याउँन सक्छ। तर कम स्तरले मोटोपना बढाउने र मुटु रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ।
एस्ट्रिओल गर्भधारणका बेला बढ्छ। यसले शरीरलाई सुत्केरी हुनका लागि तयार पार्छ र शिशु जन्मने बेला यसको स्तर उच्च विन्दुमा पुगेको हुन्छ।
एस्ट्रोजेन गर्भधारणका बेला आमाको स्वास्थ्य र शिशुको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ। ब्रेस्ट टिस्युका लागि र स्तनपान गराउनका लागि एस्ट्रोजेन हार्मोन आवश्यक हुन्छ।
एस्ट्रोजेन हार्मोनमा कमी भयो भने के हुन्छ?
एस्ट्रोजेन हार्मोनमा कमी या असन्तुलन भयो भने बेचैनी हुने, मूड परिवर्तन हुने, प्रजनन क्षमतामा कमी आउने र कोलेस्टेरोलको स्तर कम हुनेजस्ता लक्षण देखिनसक्छन्।
युनिभर्सिटी अफ मेरिल्याण्ड मेडिकल सेन्टरको अध्ययनबाट एस्ट्रोजेनको स्तर कम हुने गर्भवती महिलाका शिशुमा प्रजनन समस्या हुनसक्ने देखिएको थियो। यस्तै, यसको स्तर बढ्दा प्रजनन क्षमतामा कमीका साथै गर्भपात पनि हुनसक्ने तथ्य पाइएको थियो।
यसको स्तर बढाउनका लागि शरीरमा फाइटोएस्ट्रोजेनको मात्रा बढाउनुपर्छ। यो खानामा पनि पाइन्छ। फलफूलको सेवनले फाइटोएस्ट्रोजेनको स्तर बढ्छ। यस्तै, भटमास, केराउ, काउली, बन्दाजस्ता सेवनले पनि बढ्छ।
गर्भधारणका बेला यो एस्ट्रोजेनको स्तर कम भयो भने गर्भमा हुर्किरहेको शिशुलाई गम्भीर असर पर्नसक्छ। किनकि, यसको सहयोगले भ्रुणलाई पोषण प्राप्त हुन्छ। कम एस्ट्रोजेनले शिशुमा कुपोषणको समस्या हुनसक्छ। यसको स्तर कम हुँदा गर्भपतन हुने, गर्भाशयमा अण्डा कम बन्नेजस्ता समस्या आउँछन्। गर्भधारणका बेला हार्मोनको स्तरमा उतारचढाव भइरहन्छ र एस्ट्रोजेनको स्तर पनि परिवर्तन भइरहन्छ।
पुरुषका लागि कत्तिको आवश्यक?
पुरुषमा एस्ट्रोजेन हार्मोनको स्तरमा कमी भयो भने उत्तेजनामा कमी, प्रजनन क्षमतामा कमी र शुक्राणुको गुणस्तरमा समस्या हुनसक्छ।
शरीरमा एस्ट्रोजेनको कमी परीक्षण गर्न चिकित्सकले रगत मार्फत् एस्ट्रोजेनको तत्व एस्ट्रिओल र अल्फा फेटीप्रोटीनको जाँच गर्नसक्छन्। यसका अलावा एचसीजीका लागि पनि परीक्षण पनि गरिन्छ।
डिस्क्लेमरः कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या देखिएमा सम्बन्धित चिकित्सकको सल्लाह /परामर्श लिनुहोला